Waalidiinta Soomaalida oo lagu dhiiri-gelinayo talaalka carruurtooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ruux la tallaalayo. Sawirle: COP / NTB scanpix / TT
Waalidiinta Soomaalida oo lagu dhiiri-gelinayo talaalka carruurtooda
La daabacay torsdag 17 mars 2016 kl 08.37
Qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xaafadaha waqooyiga Stockholmayaan caruurtooda ka talaalin cudurada jadeecada, busbuska iyo can-bararka.
Laba xaafadood oo ka mid ahxaafadaha ku yaala waqooyiga Stockholm ayaa ah goobaha ugu badan ee aysoomaalida Sweden degan yahiin. Dhawaana ay hey’adda caafimaadka dadweynaha(Folkhälsomyndigheten) xaafadahan ka hirgelin doonta mashruuc lagu dhiirogelinayo soomaalida xaafadahaas ku nool si ay carruurtooda uga talaalaancudurada laysku yiraahdo MPR ee kalo ah jadeecada, busbuska iyo can-bararka.
Tiro aan ka badneyn boqolkii 70dadka xaafadahan ayaa ka talaalan cuduradan, sida ay sheegtay hey'addaFolkhälsomyndigheten.
Sababta ay u yartahay talaalkacarruurta soomaalida ee xaafadahan ayaa ah cabsi ay dadka qaarkiisa ka qabaanin talaalka uu dhaliyo autism – inkastoo daraasad arrinkan lagu sameeyey aymuujisay in aysan jirin wax raad ah oo talaalka iyo autism isku leeyahiin,sidaas waxaa tiri Aisha Jama oo ka howl-gasha hey’adda Caafimaadka dadweynaha:
- Waxay ka welwelsan yahiincarruurtooda in ay hadalka billaabin, waxaa jira cabsi ah talaalka in uucarruurta u keeno autism, ayey tir Aisha Jama oo ka howl-gasha hey’addacaafimaadka dadweynaha (Folkhälsomyndigheten).
Hey’adda ayaa hadda dooneysa inayxaafadahaas ka billowdo mashruuc wargelin ah oo dadka xaafadahan laguwargelinayo in aysan carruurtooda talaalka kalo baaqanin.
- Hadafka mashruucaan waxa weeye in macluumaadka la xiriira talaalka carrurta dadkan loogu soo bandhigo qaab iyaga ku qanci karaan, oo ah afka in looga sheego. Sidaas daraadeed waxaan u qabanaa casharo, waxaan waxbrasho siinaa shaqsiyaad fure u noqon kare oo arrimahan xiiseynaya. Waxaan soo saarnay film kor u soo qaadaya tusaaleyaal wanaagsan oo la xiriira talaalka. Siyaabo kalo duwan oo afka ah ayaan xogta talaalka ku siinaa,
Been abuur ka dhan ah talaalka
Sannadkii 1998 ayaa la faafiyeydaraasad been abuur ah oo lagu daabacay wargeyska culuumta dawooyinka TheLancet. Daraasada oo lagu yiri in talaalka cudurada laysku yiraahdo MPR uukeeno autism, iyadoo cudurkan laga helay carruur badan oo ay dhaleeceeyeen qurbojoogta soomaaliyeed.
Mashruucan hey’adda ayaa dadkalagu barayaa sida difaaca jirka ee qofku u shaqeeyo si ay u fahmaan sidatalaalka u shaqeeyo. Waxaa sidoo kale wax laga barayaa cudurada kalo duwan eelayska talaalo, sida jadeecada, can-bararka iyo busbuska, ayey tiri Aisha Jamaoo u qaabilsan hey’adda caafimaadka dadka Folkhälsomyndigheten arrimahatalaalka.